अन्तर्वार्ता Archives - Page2of4- मूल्याङ्कन अनलाइन
घनश्याम ढकाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको तपाईं अध्यक्ष हुनुन्छ । यो कस्तो प्रकृतिको संस्था हो र यसको स्वरूप र उद्देश्य तथा कार्यक्षेत्रहरू के–के हुन् बताइदिनुहुन्छ कि ? निनु – यो प्रतिष्ठान सांस्कृतिक प्रकृतिको संस्था हो । यसले कला, साहित्य, संस्कृति, सौन्दर्य चिन्तन र सामाजिक शास्त्रका विविध विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, मौलिक कृतिहरूको रचना, प्रकाशन आदिको काम गर्नेछ । आवश्यकता अनुसार नेपालका विभिन्न भागमा मात्र होइन, विदेशमा समेत यसका शाखाहरू राख्नुपर्छ भन्ने सामान्य सोच हामीले बनाएका छौं । घनश्यामजीको कार्यक्षेत्र पोखरा रहेको सन्दर्भमा पोखरालाई विशेष महत्व दिएर कार्य गर्ने सोच पनि यसको छ । प्रगतिवादी साहित्य–कला, संस्कृतिको हितमा कार्य गर्ने, समाजवादी यथार्थवादी साहित्य—कला, संस्कृति,पूरा पढ्नुहोस्
(रञ्जित तामाङ भर्खरै सम्पन्न अखिल क्रान्तिकारीको २१ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) निकट यस बिद्यार्थी संगठनको भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्वका लागिपूरा पढ्नुहोस्
(वाइ सिएल नेपालको एकताको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भोलि भदौ २ बाट काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । माओवादीको युवा अग्रदस्ताको रुपमा युवा कम्युनिस्टहरुको यो संगठनका कारणले माओवादी बलियो बनेको ठानी पहिलो संविधानसभाकोपूरा पढ्नुहोस्
(अखिल क्रान्तिकारीले आगामी भदौ ७ देखि ११ सम्ममा २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ । यो एकताको सम्मेलन पनि भएको आयोजक समितिले बताएको छ । माओवादी केन्द्र निकट यो बिद्यार्थी संगठनपूरा पढ्नुहोस्
(संघीयता र स्वायत्त स्थानीय तह माओवादी एजेण्डा हुन् । जनयुद्ध र ०६२/६३ को जनआन्दोलनले उठाएको एउटा प्रमुख एजेण्डा राज्यलाई पहिचान सहितको संघात्मक संरचनामा लैजानु थियो । र, संविधानले अहिले संघीयतापूरा पढ्नुहोस्
रुपान्तरण नहुने हो भने पार्टीले क्रान्ति गर्दैन– लीलामणि
(नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय सचिवालयको विस्तारित बैठक चलिरहेको छ । आजसम्म बिभिन्न जिल्लाका जिल्ला इञ्चार्जहरुले चुनावमा पार्टीको पराजय हुनुका कारणलगायत जिल्लाको राजनीतिक स्थितिको रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरे । भोलि शुक्रवारपूरा पढ्नुहोस्
(गत हप्ताको मंगलबार हामीले सन् १८७९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल मार्क्ससँग उनको लण्डनस्थित आफ्नै घरमा लिएको अन्तरवार्ताको पहिलो भाग प्रस्तुत गरेका थियौँ । आज हामी सोही अन्तरवार्ताकोपूरा पढ्नुहोस्
असार २४, काठमाडौँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले भर्खरै सम्पन्न भएको दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पाठ सिकेर आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा निकै सुधार ल्याइने दृढता व्यक्त गरेका छन्पूरा पढ्नुहोस्
सन् १८७९ मा अमेरिकी रिपब्लिकनहरुको अखबार ‘शिकागो ट्रिब्युन’ का एक सम्वाददाताले कार्ल मार्क्ससँग उनको लण्डनस्थित आफ्नै घरमा अन्तर्वार्ता लिए । धेरै वर्षसम्म ‘ट्रिब्युन’ समाजवाद र उदीयमान ट्रेड युनियनहरु दुबैको भावनात्मक झड्काकोपूरा पढ्नुहोस्
(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश पार्टीभित्रका विसंगति र गलत प्रवृत्तिलाई लिई आवाज उठाउनेको रुपमा चर्चित नेता हुन् । त्यस्तै एक सन्दर्भलाई लिई हालै मात्र उनलेपूरा पढ्नुहोस्
मुलुकमा उत्पन्न असहज परिस्थितिको वोधले भ्रमण स्थगित गरेँ
(नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भोलि फागुन २६ गतेदेखि सुरु हुने गरी तय भएको आफ्नो युरोप भ्रमणलाई स्थगित गरेका छन् । युरोपमा उनले त्यहाँपूरा पढ्नुहोस्